ဓာရဏပရိတ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » ဓာရဏပရိတ်
Posted by Yin Nyine Nway on Dec 10, 2011 in Buddhism | 11 comments
ဗုဒ္ဒဟောကြားတဲ့ တရားတော်တွေကို ရွကဖတ်ရင် အန္တရာယ်ကင်းတယ်လို့ ယုံကြည်တယ်
အကျိုးတရားထက် ကုသိုလ်၇ဖို့ ရွတ်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့လဲထင်တယ်
အားလုံးလသြိပြီးသားဖြစ်တဲ့ ဓာရဏပရိတ် ပါ
တခြားသူတွေမှာမရှိပဲ ဗုဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားမှာသာရှိတဲ့ ဂုဏ်တော် 18ပါးပါ ..
မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏အသက်ကို တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူသည် ဘေးအန္တ-ရာယ် မပြုနိုင်။
မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့၏ ရှစ်ဆယ်သောလက္ခဏာတော် တစ်လံမျှလောက်သော ရောင်ခြည်တော်ကို တစ်စုံ တစ်ယောက်သောသူသည် ဘေးအန္တရာယ် မပြုနိုင်။
ဝိပဿီအစရှိသော ရှေးဘုရားတို့ကဲ့သို့ လာခြင်းကောင်းတော်မူသော မြတ်စွာ ဘုရားသည် ကိုယ်ဖြင့်ပြုအပ်သော ”ကာယဒုစရိုက်မှု”သည် မရှိ။ နှုတ်ဖြင့်ပြု အပ်သော ”ဝစီဒုစရိုက်မှု”သည် မရှိ။ စိတ်ဖြင့်ပြုအပ်သော ”မနောဒုစရိုက်မှု” သည် မရှိ။ လွန်လေပြီးသော ကာလ၌ မြတ်စွာဘုရားရှင်အား ဆီးတားပိတ်ပင် သောဉာဏ်သည်မရှိ။ နောင်လာလတ္တံ့သောကာလ၌ မြတ်စွာ ဘုရားရှင်အား ဆီးတားပိတ်ပင်သော ဉာဏ်သည်မရှိ။ မျက်မှောက်သောကာလ၌ မြတ်စွာ ဘုရားရှင်အား ဆီးတားပိတ်ပင်သော ဉာဏ်သည်မရှိ။ မြတ်စွာဘုရားအား အလုံးစုံကိုယ်ဖြင့်ပြုအပ်သော အမှုသည် ဉာဏ်တော်ရှေ့ သွားမရှိခြင်းသည် မရှိ၊ ဉာဏ်တော်သို့ အစဉ်မလိုက်ခြင်းသည် မရှိ။ မြတ်စွာဘုရားအား အလုံးစုံနှုတ်ဖြင့် ပြုအပ်သော အမှုသည် ဉာဏ်တော်ရှေ့သွားမရှိခြင်းသည် မရှိ၊ ဉာဏ်တော်သို့ အစဉ်မလိုက်ခြင်းသည် မရှိ။ မြတ်စွာဘုရားအား အလုံးစုံစိတ်ဖြင့်ပြုအပ်သော အမှုသည် ဉာဏ်တော်ရှေ့သွားမရှိခြင်းသည်မရှိ၊ ဉာဏ်တော်သို့ အစဉ်မလိုက် ခြင်းသည် မရှိ။
ဓာရဏပရိတ် ကို ရွတ်ဖတ်ရင်
ကြုံမဲ့ ၊ ကြုံဆဲ ၊ ကြုံလတဲ့ အန္တရာယ်တွေ ကင်းစေတယ်
ဒါကြောင့် ဓာရဏပရိတ် ကို ရွက်ဖတ်ကြပါလေ…
ရွာသူလေးတွေ ဒီလိုဘုရားတရား ကိုင်းရှိူင်းတတ်တာသိတော့
ကိုရင်ကြီးမှာ ၀မ်းသာပီတီဖြစ်ရပါတယ်ကွယ်… :cool:
*ဘုရားရှင်ရဲ့ တရားတော်ကို နားကြားရသူတို့သည်
တော်ကြာ ဂျိုးကပ်နေမှာကြောက်လို့ (ငရဲမှာ)
နတ်ပြည်မှာ နတ်သမီး 1000နဲ့ ဒန်ဒန့်တန်၇အောင် ရှဲပေးတာ…
နောက်ဘ၀ နတ်သားလေး ဖြစ်မယ့် ကိုရင်က…
နတ်သမီးတစ်ထောင်မလိုတဲ့ ကိုရင်နတ်သားလေးက ပြသာဒ်ဘေးမှာ
နွယ်လေးအတွက် နတ်သမီးဖြစ်ပါစေလို့ … ဆုတောင်းပေးမိရင်
ကိုရင့်မှာ အပြစ်ဖြစ်မှာလားဟင်…. ;) ;)
သာဓုသာဓု သာဓု အန္တရာယ်ကင်းတာပေါ့
မြတ်စွာဘုရားအား အဆီးအတား အပိတ်အပင်မရှိသော ဉာဏ်တော်သည်ဖြစ်၏။
မြတ်စွာ ဘုရားရှင်အား ဆီးတားပိတ်ပင်သော ဉာဏ်သည်မရှိ။
ဉာဏ်တော်ပြဋ္ဌာန်းခြင်းရှိသည် ဉာဏ်တော်၏ နောက်သို့ အစဉ်လိုက်သည်။
ဉာဏ်တော်သို့ အစဉ်မလိုက် ခြင်းသည် မရှိ။
အဲဒီဂုဏ်တော် စာသားလေးတွေကို အရမ်းကြည်ညိုနှစ်သက်တယ်….။ ရင်ငြိမ်းလည်း အခုလို ပြုရတဲ့ ကုသိုလ်ကြောင့် လောကီ၊ လောကုတ် ပညာကုသိုလ် အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်း…။
အသံထွက်လေးပါ ရေးပေးပါလို့ 
လူတိုင်းဟာ..ဘုရားဖြစ်ခွင့်ရှိတယ်..။ ဘုရားနဲ့တန်းတူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အထိ.. မိမိစိတ်ဓါတ်ခွန်အားမြှင့်တင်… ပြသတဲ့ အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်ပါတယ်..။
“သင့်ကိုယ်ထဲတွင်..အလွန်မြင့်မြတ်သော.. မြတ်စွာဘုရားနှင့်တန်းတူယောက်ျားတဦးရှိသည်..။ ဘယ်တော့မှ.. ဘယ်သူ့ကိုမှ… မာန်မချ..ဦးမချပါနှင့်…။” လို့ ပြောချင်ပါတယ်..။
အလောင်းစည်သူမင်းက… ဘိုးဘွားရုပ်ထုတွေ..တန်းစီဦးချတော့.. မခံနိုင်တဲ့..ဘိုးဘွားရုပ်တွေ..ပြိုကျ..ခေါင်းပြတ်တယ်တဲ့..
သွားဦးမချနဲ့.. ဖူးမျော်မာန်လျှော့..ကန်တော့တာတွေ…အကြောင်းမဲ့(အရောင်ကြည့်ပြီး).. မလုပ်ကြနဲ့..။
သဂျီးအား ဦးချပါ၏။။ သူ့ခေါင်းများ ပြုတ်မလားလို့ မပြုတ်သေးရင် ထပ်၍ဆယ်ကြိမ်ဆယ်ခါ ဦးချပါ၏။ မဖြစ်သေးဘူးလား နောက်ထပ် အကြိမ်တရာ… အကြိမ်တထောင်….အကြိမ်ဘီလျံ ထရီလျံ ဇီလျံ….
အင်း…. အားလုံး ဆုတောင်းပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဒီပရိတ်ကတော့ ငယ်ငယ်ကတည်းက ဘကြီးက သမီးလာ ဆို …ဆိုပြီး လက်သပ်သင်ပေးတဲ့အတွက်
” မြတ်စွာဘုရားအား အဆီးအတား အပိတ်အပင်မရှိသော ဉာဏ်တော်သည်ဖြစ်၏။
ဉာဏ်တော်သို့ အစဉ်မလိုက် ခြင်းသည် မရှိ။ ”
ဒီဂုဏ်တော်က လက်တွေ့လုပ်နေတဲ့အလုပ်မှာ ဘာ အတားအဆီးမှ မရှိဘူးလို့ ပြောတယ်
လုပ်နေတဲ့ အလုပ်မှာ အတားအဆီးမရှိ ဘေးရှင်းသွား ပါလိမ့်မယ်
အားလုံးလဲ …ဒီပရိတ်ကို ရွတ်ပြီး
လိုအင်ဆန္ဒများ … အတားအဆီးမရှိ ပြည့်စုံပါစေ